5 Zvino madzimambo ose evaAmori,+ aiva mhiri kwaJodhani nechokumavirira, nemadzimambo ose evaKenani,+ aiva pedyo negungwa, paakangonzwa kuti Jehovha akanga aomesa mvura yaJodhani pamberi pevanakomana vaIsraeri kusvikira vayambuka, mwoyo yawo yakabva yatanga kutya,+ uye akanga asisinazve ushingi nokuda kwevanakomana vaIsraeri.+ 2 Panguva iyoyo chaiyo Jehovha akati kuna Joshua: “Gadzira mapanga ematombo akaoma kwazvo, udzingisezve+ vanakomana vaIsraeri, kechipiri.” 3 Naizvozvo Joshua akagadzira mapanga ematombo akaoma kwazvo, akadzingisa vanakomana vaIsraeri paGibhiyati-haararoti.+ 4 Chikonzero chakaita kuti Joshua avadzingise chaiva ichi: vanhu vose vakabuda muIjipiti, vanhurume, varume vose vehondo, vakanga vafira+ murenje mumugwagwa pavakanga vachibuda muIjipiti. 5 Nokuti vanhu vose vakabuda vakanga vakadzingiswa, asi vanhu vose vakaberekerwa murenje mumugwagwa pavaibuda muIjipiti vakanga vasina kuvadzingisa. 6 Nokuti vanakomana vaIsraeri vakanga vafamba murenje kwemakore makumi mana,+ kusvikira rudzi rwose rwevarume vehondo vakabuda muIjipiti, vasina kuteerera inzwi raJehovha rwapera, vakanga vapikirwa naJehovha kuti aisazomboita kuti vaone nyika+ yakanga yapikirwa madzitateguru avo naJehovha kuti atipe,+ nyika inoyerera mukaka nouchi.+ 7 Akamutsa vanakomana vavo panzvimbo pavo.+ Ava ndivo vakadzingiswa naJoshua, nokuti vakanga vasina kudzingiswa, zvavakanga vasina kuvadzingisa mumugwagwa. 8 Zvino pavakanga vapedza kudzingisa rudzi rwose, vakaramba vakagara munzvimbo yavo mumusasa kusvikira vapora.+ 9 Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Nhasi ndabvisa kuzvidza kweIjipiti pamuri.”+ Naizvozvo nzvimbo iyoyo yakatumidzwa kuti Girigari+ kusvikira nhasi. 10 Zvino vanakomana vaIsraeri vakaramba vakadzika musasa muGirigari, vakaita paseka pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho,+ ari manheru, pamapani erenje eJeriko. 11 Vakatanga kudya zvimwe zvibereko zvenyika yacho musi wakatevera paseka, makeke asina kuviriswa+ nezviyo zvakakangwa, pazuva iroro. 12 Mana yakabva yaguma pazuva rakatevera racho pavakanga vadya zvimwe zvibereko zvenyika yacho, uye mana haina kuzovapozve nokuda kwevanakomana vaIsraeri,+ uye vakatanga kudya zvimwe zvibereko zvenyika yeKenani mugore iroro.+ 13 Zvino Joshua paakanga ari pedyo neJeriko akatarira, akaona nechouko mumwe murume+ aiva akamira pamberi pake, bakatwa rake rakanga rakavhomorwa riri muruoko rwake.+ Naizvozvo Joshua akafamba achienda kwaaiva uye akati kwaari: “Uri mumwe wedu here kana kuti mumwe wemhandu dzedu?” 14 Iye akati: “Aiwa, asi ini—somukuru weuto raJehovha ndauya zvino.”+ Naizvozvo Joshua akawira pasi nechiso chake+ akagwadama, akati kwaari: “Ishe wangu ari kuti kudiniko kumushandi wake?” 15 Mukuru weuto raJehovha akatiwo kuna Joshua: “Bvisa hwashu dzako mutsoka dzako, nokuti nzvimbo yaumire itsvene.” Joshua akabva aita saizvozvo.+